“Haddii tartan furan lagu tilmaamay caddaalad darro, waa maxay caddaaladu? Xil. Saadiq Abshir Garaad. – Radio Daljir
Seteembar 30, 2011 12:00 b 0
Garowe, Sept 29 – Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Puntland oo ka soo jeeda gobollada Sool & Cayn ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dhaliil iyo eedayn lala xiriiriyey maaraynta deeqdii warbarasho ee dalka Turkigu ay u fidisay ardayda Somalida, gaar ahaan kuwa Puntland.
Mudanayaashu ayaa ku sifeeyey imtixaanaadku in ay uga dhaceen Puntland si cadaalad ah, furan, loo siman yahay, ayna ka faa’iidaysteen ardaydii nasiibka u heshay, kuna guulaysatay imtixaanaadka.
Xil. Saadiq Abshir Garaad oo ka hadlay tuhunka iyo musuqmaasuqa lagu eedeeyey wasaarada waxbarashada ayaa sheegay in ardayda gobolka Cayn ay imtixaanaadka ku galeen magaalada Galkacyo halka kuwii gobolka Sool-na ay ku galeen magaalada Garowe, celcelis ahaanna ay 27 arday oo ka soo jeeda gobollada Sool & Cayn ay heleen fursadao waxbarasho.
“Isu geyn ardayda waxbarashada heshay ee gobollada Sool & Cayn inta aan haynaa waa 27 arday” ayaa uu yiri Xil. Saadiq oo la weydiiyey ardayda gobollada Sool & Cayn ee ku guulaysatay deeqda waxbarasho.
Mudanayaashyu waxaa ay dhalleeceeyeen maamulka Somaliland oo ay sheegeen in uu si xun u maamulay deeqdii waxbarasho oo sida ay sheegeen aan laga qayb galin ardayda ka soo jeeda gobollada Sool, Sanaag & Cayn.
Qaadista iyo maaraynta imtixaanaadka waxaa maamulayey wafti macallimiin ah oo ka socday dalka Turkiga walow dhawrkii maalmood ee la soo dhaafay ay soo baxeen warar aan sugnayn oo tibaaxaya musuqmaasuq iyo maarayn xumo in ay dhacday.
Mudanayaashu waxaa ay beeniyeen tuhun iyo musuqmaasuq lagu eedeeyey wasaarada waxbarashada ee Puntland oo lagu dhaliilay in aanay si cadaalada ah u maarayn imtixaanaadka iyo deeqda waxbarasho.
Madaxda wasaarada waxbarashada ayaa iska fogaysay eedaha loo soo jeediyey, daabacdayna tirada ardayda ee waxbarashada heshay iyo gobollada ay ka kala yimaadeen.
Maxamed C/llaahi ‘Kooshin’